Tag: Howlgal | Sagal Radio Services
Jowhar oo uu xalay dil ka dhacay iyo howl gal laga sameeyay magaalada
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa sheegaya in howl galo ciidamada dowladda xalay ka sameeyeen Xaafadaha magaalada ay ku soo qabteen dad ku dhow boqol ruux.
Howl-gallada Amniga lagu sugayo, oo ay ciidamadu ka hadleen (Sawirro)
Ciidamada booliiska Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa nabadsugidda iyo booliiska AMISOM ayaa howlgallo dad badan lagu qabqabtay ka sameeyay shalay xaafadda Buulo-xuubeey ee degmada Wadajir.
Howl gallo amniga lagu sugayo oo ciidamo ay Muqdisho ka wadaan
Sagal Radio Services • News Report • May 21, 2013
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka howl gal ka wada degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, iyadoo wax dhaq dhaqaaq ah aysan ka jirin xaafadaha ciidamadu howl galka ka wadaan.
Howl lagu qab qabtay dad badan oo Baladweyne laga sameeyay
Ciidamada dowladda iyo kuwo AMISOM ee gobolka Hiiraan ayaa maanta hawlgallo lagu adkeynayo ammaanka oo ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku soo qabqabtay 25 qof oo lagu eedeeyay in ay gudaha magaalada ka maleegayeen falal amni darro.
Howl-gal ballaaran oo amniga Muqdisho lagu sugaayo oo ay ciidamadu wadaan
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya ayaa saakay howgallo baaritaanno ah si wadajir ah uga wada xaafadda Xamar-jadiid ee degmada Wardhiigley, halkaasoo la sheegay inay u dhuumanayaan xubno ka tirsan Al-shabaab.
Howl gallo dad lagu soo qab qabtay oo Muqdisho laga sameeyay
Ciidamada booliska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, oo howl gallo maanta ka sameeyay qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, ayay ku soo qabteen dad ku dhow seddex boqol oo ruux, kuwaas oo baaritaanno dheeraad ah lagu sii sameyn doono.